Mini LNG Isityalo-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>izicelo>Isityalo esincinci seLNG
IMini-LNG sesona sisombululo sisiso kwimithombo yegesi engaqhelekanga, ukulungiselela indlala yamandla ehlabathi. I-SinoCleansky iphuhlisa itekhnoloji ye-MRC ye-LNG encinci, ekwi-skid-mounted, eyenzelwe iimodyuli, kwaye elungiselelwe ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zegesi yendalo, kubandakanya igesi enxulumene noko, igesi yomgama kakuhle, igesi yomsalo, irhasi yebhedi yamalahle, ukunyuka kwerhasi yesixeko , ii-biogas kunye nokunye.
Ukuhlangabezana nemigangatho ephezulu ye-LNG, siye saqulunqa uyilo lwethu lokukhetha kunye nokulinganisa izixhobo kunye nezisombululo ezinobuchule. Amandla ethu axhomekeke kwinto yokuba siyakwazi ukulungelelanisa iimfuno zabathengi kunye namava afunyenwe kwiminyaka edlulileyo kunye nokubonelela ngezisombululo ezenziwe ngokufanelekileyo ngokusekwe kwimisebenzi yethu eqhubekayo kuphuhliso lweprojekthi.
Izityalo zithunyelwa kumacandelo emodyuli ukulungiselela ukufakwa ngokulula nangexabiso eliphantsi. Izixhobo zifakwe njengeemodyuli ezandisiweyo, ezidityaniswa ngexesha lofakelo kwindawo kunye nenani elincinci lokudibana kwiziseko ezenziwe kwangaphambili.
Ngenxa yoko, kukho ukuncipha okukhulu kwiindleko zokufaka kunye nokugunyazisa.
I-SinoCleansky ibonelela ngoqeqesho kubuchwephesha beenjineli zabaxumi kumzi-mveliso wethu. Ngapha koko, ukufakela kwindawo kunye nokugunyazisa, konke kwenziwa phantsi kweliso kunye noxanduva lweenjineli zeSinoCleansky zengcali.
IMini-LNG sesona sisombululo sisiso kwimithombo yegesi engaqhelekanga, ukulungiselela indlala yamandla ehlabathi.
I-Gasooo, iyonwabela itekhnoloji yethu engundoqo kunye nenkqubo egcweleyo ye-MRC ye-Mini LNG ....